Insuline amin'ny bodybuilding: Jereo ny fiasan'ity hormonina ity amin'ny hypertrophy!
24 Jolay 2018
Betsaka ny olona mahalala ny vokatry ny insuline amin'ny vatan'olombelona, ​​indrindra amin'ireo olona voan'ny diabeta. Na izany aza, izy io dia nampiasaina tamin'ny gym na koa amin'ny bodybuilding, satria mitondra valiny hypertrophy manan-danja ho an'ireo atleta ireo. Amin'ity lahatsoratra ity dia ho azonao ny fiasan'ny insuline amin'ny bodybuilding.
Amin'ireto lohahevitra manaraka ireto dia ho hitanao ny fiasan'ny insuline amin'ny bodybuilding, ny fomba fiasa, inona ny vokany, ratsy amin'ny fahasalamanao, ankoatry ny valiny hafa amin'ny fanontanianao rehetra. Zahao hoe!
Ny insuline dia hormona iray izay hita ao amin'ny vatan'olombelona. Miasa mivantana amin'ny famotehana siramamy ary mifehy ny haavon'ny glucose ao anaty ra. Rehefa tsy ampy dia ilaina ny mampiditra ny atiny vita amin'ny laboratoara mba hisorohana ny fandrosoana diabeta izay miteraka olana ara-pahasalamana maromaro.
Ho fanampin'ity singa tena lehibe ho an'ny vatan'olombelona ity, ny atleta sasany dia nahita fa ny hormonina voajanahary, novokarin'ny vatana, dia manelingelina ny tombam-bolan'ny hozatra. Noho izany, misy ny fifandraisan'ity vokatra ity amin'ny bodybuilding.
Insuline dia hormonina anabolika, noho izany dia manampy amin'ny hypertrophy sy mampitombo ny hozatra. Fa rehefa be loatra ny siramamy ao amin'ny vatana ary tsy afaka manivana io glucose io dia mety hiteraka tavy amin'ny vatana sy taova manokana koa, toy ny tavy mampidi-doza ao amin'ny atiny.
Noho izany, ny fifandraisan'ny hormona amin'ny bodybuilding dia fitiavana sy fankahalana. Izy io dia mety hitondra tombony na fahavoazana ho an'ireo manao fanatanjahan-tena.
Inona no ilana insuline amin'ny bodybuilding?
Ny insuline amin'ny bodybuilding dia mety hitondra tombony vitsivitsy noho ny fiatra anabolika. Izy io dia afaka mampitombo ny tombam-bolan'ny hozatra noho ny antony maro, anisan'izany ny fanakanana ny fihenan'ny hozatra, izany hoe ny catabolisme proteinina
Ho fanampin'izany, ny insuline koa dia afaka mitondra asidra amine mivantana amin'ny hozatra ary mampitombo ny glycogen synthesis. Glycogen dia singa iray mahatonga ny hozatra matanjaka kokoa, matevina, ankoatry ny fanampiana ny fanatanjahan-tena ary koa ny fiaretana sy ny fahasitranan'ny atleta.
Na izany aza tsy tonga lafatra ny zava-drehetra. Misy fiantraikany ratsy ratsy amin'ny insuline amin'ny bodybuilding.
Hormonina anabolika ve ny insuline?
Eny, hormonina anabolika fatratra io. Mbola anabolika kokoa noho ny hormonina mitombo fanta-daza aza izy io. Ny olana dia tsy mitranga foana ny fiatra anabolika, satria miankina betsaka amin'ny karazana asa hananan'ny otrikaina ao amin'ny vatanao izany.
Araka ny efa voalaza, dia afaka mampitombo ny anao hozatra na ny tavy amin'ny vatanao. Miankina amin'ny habetsahan'ny insuline sy siramamy ao amin'ny ra izany rehetra izany.
[junkie-tabs] [junkie-tabs title=”???? ANABOLISERA amin'ny fomba iray MAMPIDI-DOZA e ara-pahasalamana?! Fantaro ny marina!”] Mety naheno olona iray ianao nilaza fa poizina ny steroïde, manimba ny vatana sy ny zavatra rehetra… Saingy milaza ny marina aminao ve izy ireo? Tsindrio eto raha te hahalala bebe kokoa momba ny "Formula of the Giants". Amin'ity atiny ity dia ho hitanao ny marina momba ny anabolika: azo atao ny mampiasa azy ireo amin'ny fomba iray marina e MAMPIDI-DOZA?! Tsindrio izao ary hianatra bebe kokoa! [/junkie-tabs] [/junkie-tabs]
Ny tombotsoan'ny insuline amin'ny bodybuilding dia misy ifandraisany amin'ny fitomboan'ny masin'ny hozatra, ny fanatsarana ny fahombiazana, ny fiaretana, ny fanarenana ny hozatra ary koa hypertrophy.
Ireo no tombony azo amin'ny ankapobeny, saingy, araka ny efa nolazaina, dia tsy azo antoka fa hitondra ireo vokatra anabolika ireo. Mety ho ny mifanohitra amin'izay no izy.
Ny insuline amin'ny bodybuilding dia mety hitera-doza amin'ny atleta. Manakana ny lipase, ohatra, ny anzima tompon'andraikitra amin'ny famotehana ny tavy ao amin'ny vatan'olombelona. Izany dia mahatonga anao hanana tavy matavy kokoa voangona ao amin'ny vatanao.
Ho fanampin'izany, mampihena ny fampiasan'ny tavy ny vatana koa io akora io ary mahatonga ny tavy hiangona ao amin'ny faritra misy ny atleta. Ho fanampin'izany, ny fanehoan-kevitra sy ny singa hafa dia mahatonga ny insuline hivadika karazana tavy maro amin'ny hoditra, hozatra ary taova.
Ahoana ny fampiasana insuline hahazoana tombony be sy fatiantoka matavy?
Tsotra ny fomba fiasan'ny insuline. Izy io dia natao hifehezana ny haavon'ny siramamy ao anaty sy hisorohana ny diabeta. Na izany aza, azo ampiasaina amin'ny bodybuilding amin'ny endriny voajanahary. Ho an'ity dia mila mahafantatra ny fotoana marina hamoahana ilay zavatra ao amin'ny vatanao ianao.
Mba hahazoana masinina, ny tsara indrindra dia ny famoahana ny atiny hormonina, izany hoe mihinana siramamy mandritra ny andro ary, indrindra, aorian'ny fampihetseham-batana. Ity no fotoana mety indrindra handraisanao ilay hormonina hypercalorika malaza ary hampiorina ny hozatra ao anaty hozonao.
Raha te ho very tavy ianao dia tsara kokoa ny misoroka ny fihinanana gliosida sy siramamy. Arakaraka ny ilanao ny insuline miasa ao amin'ny vatanao no mahabe ny fahafahanao mampihena ny lanjanao.
➨ Misy fomba azo ampiasaina ve ANABOLISERA LALANA MAMPIDI-DOZA?! Tsindrio eto ary fantaro ny marina izay tsy tian'izy ireo hambara aminao!
Raha tianao ity lahatsoratra momba ny insuline amin'ny bodybuilding ity dia zarao amin'ny namanao sy ny fianakavianao amin'ny tambajotran-tserasera misy anao!